Ra’iisul Wasaaraha Dalka Oo Booqday Bukaanada Ku Jira Ex Isbitaal Digfeer+Sawirro – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke booqashada uu ku tagay Isbitaalka Ordugan waxaa ku wehlinayey wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, iyagoo booqashadooda ka bilaabay qeybta ay ku jiraan dhaawacyadii ku soo waxyeelloobay Qaraxii 20-kii bishan ka dhacay Hotelka Central ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa mid mid u booqdey kana xog wareystay xaaladooda caafmaad, inkastoo ay ku jiraan Isbitaalka dad ay xaaladoodu adag tahay, Ra’iisul wasaaraha inta uu booqanayey dhaawacyada ayuu war-bixinno ka dhageysanayey Dhaqaatiiirka adeegga Caafmaadka ee Isbitaalka.
Sidoo kale Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa kulan la qaatay maamulka Isbitaalka Ordugan ee la oran jiran Digfeer, kulankaas ayaana looga hadlay sidii loo boggaadin lahaa howlaha bixinta adeegyada Caafmaadka ee la siiyo shacabka Soomaaliyeed oo isaga kala imaanaya inta badan gobollada dalka Soomaaliya, maadaama Isbitaalkan uu yahay midka ugu ballaaran Soomaaliya oo dhan.
Booqashada iyo kulankaasi kaddib ayaa waxaa Warbaahinta Qaranka la hadlayey Wasiirka Warfaafinta Hiddaha iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye), waxa uu sheegay in ujeedada booqashadan ay aheyd sidii loogu adeeggi lahaa Xaaladda guud ahaan dadkii ku soo waxyeelloobay Qaraxii Central Hotel ka dhacay Jimcihi la soo dhaafay, isla markaana dadaal loogu bixin lahaa dhaawacyada u baahan in loo Fidiyo gurmad caafmaad oo dibedda ah loo qaado, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay meel uga soo wada jeestaan kuwa dhagar-qabayaasha ah ee Shacabka gumaadaya.
Sidoo kale Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, ayaa sheegay in Ra’iisul wasaaruhu uu uga mahadceliyey maamulka Isbitaalka Ordugan sida ay ugu dadaaleen in lala tacaallo xaaladda caafmaadka dhaawacyada la keenay.
20-kii Bishan ayeey ku soo dhaawacmeen dadkii uu booqdey Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Qarax argagaxiso oo ay geysatay Kooxda nabad-diidka ah ee Al-Shabaab, waxaana ayna Xukuumaddu ku howlan tahay sidii ay si dhow ula socon lahayd xaaladda dadkii wax ku noqday oo qaarkooda la qorsheynayo in loo qaado caafmaad dibedda ah.
Wasiirka Haweenka Oo Kulan La Qaadatay Ururada Bulshada